Doorashada madaxweynaha Galmudug oo dib loo dhigay | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Doorashada madaxweynaha Galmudug oo dib loo dhigay
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Sidii horeyba loo filayay waxaa uu dib u dhac ku yimid doorashadii ay dhabarka ka riixeysay Dowladda Federaalka, ee la doonayay in lagu soo doorto Madaxweynaha Galmudug iyo Ku-xigeenkiisa.
Doorashada oo ahayd in Khamiista berrito ay ka qabsoomto Magaalada Dhuusamareeb ayaa dib loo dhigay muddo saddex cisho ah, sida uu ku dhawaaqay Guddiga Doorasahada Madaxtooyada ee garabka dowladda.
Xildhibaan Maxamed Xuseen Tahliil, Gudoomiyaha Guddiga Doorashada Madaxtooyada Galmudug ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in saddex maalmood dib loo dhigay doorashada.
Gudoomiyaha Guddiga Doorashada ayaa tani ku macneeyay mid ku timid codsi uu u soo jeediyay Gudoomiyaha Baarlamaanka Galmudug, Maxamed Nuur Gacal.
Doorashadan ayaa waxaa si weyn uga horyimid afar ka mida musharaxiinta ugu cadcad tartanka loogu jiro Xafiiska Madaxtooyada Galmudug, ka dib markii ay sheegeen inaanay ka qaybgeli doonin doorasho uu guddigii qaban lahaaba kala qaybsan yahay.
Sidoo kale waxay ku soo aadaysaa, xilli maanta Xildhibaanada garabka Ahlu Sunada Gobolada Dhexe ay Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan u doorteen inuu noqdo Madaxweynaha xigga ee Galmudug.
Si kastaba ha’ahaatee, arrimahan ayaa ku soo beegmaya, xilli Beesha Caalamka ay walaac xoogan ka muujisay doorashada sida weyn loogu kala qaybsan yahay ee Galmudug, kuna baaqday in xal laga gaaro waxa la’isku hayo.